संवैधानिक इजलासमा वकिलहरुबीच किन भयो चर्काचर्की ? - Reel Mandu
संवैधानिक इजलासमा वकिलहरुबीच किन भयो चर्काचर्की ?
काठमाडौँ । नेकपाको एकता भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलामा संलग्न न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयलाई लिएर आज चर्काचर्की परेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आउनुमा नेकपाको विभाजन नै मुख्य कारण भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठको भूमिका निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलासमै प्रश्न उठाएपछि तीनपक्षीय चर्काचर्की परेको हो । ऋषि कट्टेलको तीन बर्ष पुरानो मुद्धामा माग दावी नै नहुँदासमेत कुमार रेग्मीसङ्ग मिलेर उहाँले एक कदम अघि बढी फैसला सुनाउनुभएको थियो । त्यो फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई टुक्रा बनायो भने कुमारका दाजु माधव लोकसेवाको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभयो ।‘उहाँहरुकै फैसलाका कारण संसद विघटन भएको हो । यहि मुद्दामा बमकुमारलाई राखिएपछि निष्पक्षता रहँदैन, त्यसकारण उहाँ बेन्चमा रहन मिल्दैन’,आफ्नो बहसका क्रममा बन्दीको भनाइ थियो ।
बन्दीले इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जुरुक्क उठेर प्रतिवाद गर्नुभयो । मुद्दाको विपक्षी बनाइएका सभामुखलाई हिजो सल्लाह दिन गएकाले बन्दीले बहस गर्ने नपाउने भन्दै बडाल चर्किएपछि एकछिन बाझाबाझ भएको थियो । सल्लाह लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले बोलाए पनि जाने भन्दै बन्दीले राष्ट्रको सभामुखले बोलाउँदा किन नजाने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेपछि बडालले सभामुखलाई विपक्षी बनाएको मुध्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले उहाँसङ्ग परामर्शमा जानु गलत हुने तर्क गर्नुभएको थियो । बन्दी र बडालको बाझाबाझ बढ्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । राणाले न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘एउटा एउटा मुध्दाको पछि नलागौँ,कसै न कसैले विभिन्न फैसला गरेको हुन्छ । कसैलाई कहीं न्याय भएको होला,कसैलाई मर्का परेको हो, एउटा फैसलालाई देखाएर अर्को मुद्दा नगर्ने भन्ने हो भने त कोहि पनि नरहने अवस्था आउला नि !’
जवाफमा बन्दीले जुन फैसलाको कारणले मुद्दा अदालतमा पुगेको छ त्यसलाई फरक रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।इजलासमा चर्काचर्की पर्दा न्यायाधीश श्रेष्ठ भने चुपचाप बस्नुभयो । बन्दी बोल्दै गर्दा पछाडि बसेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, महादेव यादव,हरिहर दाहाल, टिकाराम भट्टराईलगायतले हात उठाएर समर्थन गर्दै यसवारे अहिले नै छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । चर्काचर्की बढ्दै जान थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसवारे अर्को सुनुवाईमा आइतबार हेर्ने भन्दै बहस टुंग्याउनुभएको थियो । इजलासको सवालजवाफबारे जिज्ञासा राख्दा अधिवक्ता बन्दीले आफूले जायज कुरा उठाएको बताउनुभयो । ‘बिहानै हामीले सबै कुरा बुझिसकेका थियौँ । मैले बुझेरै कुरा उठाएको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संकेत राम्रो नदेखेको भएरै कुरा उठाइएको हो । मेरो कुरामा धेरै साथीहरुको समर्थन छ ।’
संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि सुनुवाइ स्थगित – विवाद उत्पन्न भएपछि संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राख्नेगरी स्थगन भएको छ । रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको हो। नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो । बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताउनुभएको थियो । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले आइतबारका लागि सुनुवाइ सारेको हो। प्रधानन्यायधिश चालेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नो अध्यक्षमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास तोक्नुभएको छ । बहसको क्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकामा प्रश्न उठाउनुभएको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला गरेको थियो ।
अधिवक्ता बन्दीले भन्नुभयो, मैले सामाजिक सञ्जालहरु हेरेँ, अनलाइन मिडिया हेरेँ, गत फागुन २३ को फैसलाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ। उहाँले संवैधानिक इजलास छाड्नु शोभनीय हुन्छ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै हरेकले न्यायाधीश फेर्न दिएको दबाब स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । यही बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हरि बन्दीलगायतहरुमाथि इंगित गर्दै एउटै वकिलहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि परामर्श दिन र शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पनि बहस गर्न आउन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । यही मुद्दाको पक्ष शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। विपक्षमा सभामुख पनि हुनुहुन्छ। हिजो विपक्षी सभामुखलाई परामर्श दिन जाने वकिलसाप्‌हरुले आज पक्षमा रहेका देउवाका लागि बहस गर्न मिल्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नभयो । जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाले आचार संहिता र कारबाहीको विषय इजलासमा नगर्न आग्रह गर्दै शुक्रबारका लागि इजलास अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । इजलास अन्त्यको घोषणापछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो विषय नसकिएको जिकिर गर्दै आइतबार पनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनेतर्फ इंगित गर्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर विभिन्न ३० रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।